Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: April 2009
Postcard from Beijing ဆိုပြီး attachment file နဲ့ mail လာရင်မဖွင့်ပါနှင့်
CNNက NCC education ရဲ့ director ကကြေညာထားပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း
(အခုလောက်ဆိုလာလောက်ရောပေါ့)။ Postcard from Beijing ဆိုပြီး attachment
file နဲ့ mail လာပါလိမ့်မယ်။ မေးက
ပုံကအရမ်းလှတယ်တဲ့။အဲ့တာကိုဖွင့်လိုက်ရင် Hard disk Drive sector ကိုburn
တဲ့ virus ၀င်လာပြီးသင့် Hard disk တစ်ခုလုံးကို ပညာပြပါလိမ့်မယ်။
၀င်လာလို့ကတော့ပြင်လို့မရဘူးနော်။ ရေစက်ချအမျှသာဝေလိုက်တော့။ ဒီvirus
ကသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာအဆိုးဆုံးတဲ့ ။ ဒီ virus လာမှာကိုစသိတာက mckafee
company ကပါ။ တကယ်လို့ဒီvirus ၀င်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းsing out
လုပ်ပြီးrestart ချပါ။ ပြီးသွားရင် မေးကိုပြန်ခေါ်ပြီးဖျက်ပြစ်ပါ။
အဲ့တာဆို OK သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by yahutha at 8:07 PM0comments
Sis Kyon Tw23
Sis Kyon Tw23 tw23tinwin
Email မှပို့ လာ၍ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်
Posted by yahutha at 5:32 PM0comments
Posted by yahutha at 4:17 PM0comments
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ပထမနေ့ အစည်းအဝေးဓါတ်ပုံများ
Posted by yahutha at 4:11 PM0comments
အချက်သုံးချက်ကို လိုက်လျောရင် NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်
3point in NLD Tw23
3point in NLD Tw23 tw23tinwin
ကြောက်စရာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ သတင်း နှင့် ကာကွယ်ရန်အချက်များ
Swine Tw23 tw23tinwin
Posted by yahutha at 3:00 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 3:54 AM0comments
The North Korean leader Kim Jong Il has been challenged by the North Korean artist Sun Mu (not real name), who defected to South Korea eight years ago. His paintings features North Korean leader in funny ways.
Posted by yahutha at 3:37 AM0comments
gtalk tw23 tw23tinwin
Publish at Scribd or explore others: How-to-Guides & Manu training ubuntu
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိင်ငံရေးအကျဉ်းသား များအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
Posted by yahutha at 2:15 AM0comments
ဂျပန်သတင်းထောက် အသတ်ခံရသည့် ပူလီဇာဆုရ ဓါတ်ပုံ သတင်းပြတိုက်တွင်ပြသ
The photo of Japanese freelance journalist Kenji Nagai being gunned down by the Burmese solider during the Saffron Revolution in September 2007 won the Pulitzer Prize 2008. Bangkok based Reuters photographer Adrees Latif took the picture.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသား ဓါတ်ပုံသတင်းထောက် ခန်းဂျီ နာဂါ့အိ (Kenji Nagai) သေဆုံးခဲ့တာကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပူလီဇာဆု (Pulitzer Prize) ဓါတ်ပုံဆုရ ဓါတ်ပုံကားချပ်ကြီးကို အမေရိကန် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ တော် (Washington DC) က နယူစ်ဇီယမ် (Newseum) သတင်းပြတိုက်ကြီးမှာ ချိတ်ဆွဲပြသထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကားချပ်ကြီး ပြသထားတဲ့ ပြခန်းဆီမှ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းမှ ကိုကျော်ကျော်သိန်း က ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။
Posted by yahutha at 2:05 PM0comments
Bijli Slams Into Bangladesh
Updated: Friday, April 17, 2009 5:22 PM
Bijli has made landfall near Chittagog, Bangladesh, Saturday morning (late afternoon EDT) and will continue to move in an east-northeasterly motion this weekend across northwest Myanmar. Winds will slowly weaken during this time, but flooding rainfall isaconsiderable risk.
The government of Myanmar issuedaCyclone Warning for the western coastal region of the country.
Rainfall totals are expected to exceed 10 inches in many locations near the path of Bijli. Along the immediate coast of western Myanmar and southeastern Bangladesh,adangerous storm surge of 3-6 feet is possible the next several hours. There can also be an isolated tornado or two from Bijli.
Posted by yahutha at 1:17 PM0comments
Posted by yahutha at 1:39 AM0comments
Posted by yahutha at 3:23 AM0comments
လှိုင်းလုံး ၁၃ ပေကြီးမယ်တဲ့ ..လက်လှမ်းမှီရာ သတိပေးကြပါ။
Tropical Cyclone 01B (Bijli) Expected to Make Landfall Near Myanmar/Bangladesh Border
April 16th, 2009 Category: Tropical Cyclones (register to rate)
Tropical Cyclone 01B (Bijli) - April 16th, 2009
Tropical Cyclone 01B (Bijli), located approximately 145 nautical miles east-southeast of Visakhapatnam, India, has tracked north-northwestward at6knots over the last6hours. The intensity remains at 45 knots, and maximum significant wave height is 13 feet.
The cyclone is currently situated in-betweenapair of anticyclones over Myanmar and India. The NOGAPS model fields showaweak shortwave trough moving north of the system, helping induceaturn back to the East between TAU 12 and 24.
Additionally, the anticyclone over Myanmar will build south of Bijli, further steering the cyclone to the east. TC 01B is expected to make landfall near the Bangladesh/Myanmar border prior to TAU 72.
The NOGAPS and ECMWF continue to predict similar tracks; however, GFS and EGRR continue to haveamuch weaker depiction of the storm and do not forecast the turn to the East.
Warm sea surface temperatures and the 200 mb anticyclone aloft favor moderate intensification to 60 knots prior to landfall.
Richard Phillips Tw23
Richard Phillips Tw23 tw23tinwin
၁၈ ကြိမ်မြောက် အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် တိုကျို၊ဂျပန်၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြီးစီး
(၁၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို League for Democracy in Burma (LDB) မှ ကြီးမှူး၍ ဒီကနေ့ ဧပြီ ၁၂ရက်၊၂၀၀၉ နေ့တွင် ဂျပန်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာရိုးရာစားစရာရောင်းချသော ဆိုင်ခန်းများ၊ ခေတ်ပေါ်စင်တင်တေးဂီတ တီးဝိုင်းများ စုံလင်စွာဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။ယနေ့မြန်မာ၊ ဂျပန် ပရိတ်သတ် ၇၀၀ကျော် သင်္ကြန် အလွမ်းပြေ လာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါသည်။
18回目東京"ダジャン祭り”ビルマのお正月 2009年4月12日（N.L.D(LA)JB）今日井の頭公園でダジャン「水かけ祭」が執り行われた。 ◆ダジャン「水かけ祭」とは？♪♪♪◆　ビルマのお正月はビルマ暦をもとにしているために4月に新年を迎えます。お正月の最大行事がダジャン「水かけ祭」です。新年を迎えるとき、一年の悪いことや汚れを水で洗い落とし、きれいに迎えるという意味で、互いに水をかけあいます。ダジャンは一年で最もにぎやかなお祭りです。東京でも在日ビルマ国民がふるさとを思い、毎年開催しております。当日はビルマの歌や伝統舞踊が披露され、とっても美味しいビルマ料理の屋台もたくさん並びます。
ဗီဒီယို-ကိုဆန်နီ ဓါတ်ပုံ- ကိုပွား သတင်း-NLD(LA)JB လူငယ်ဌာန
Posted by yahutha at 1:28 AM0comments
Posted by yahutha at 5:17 PM0comments
နအဖ စစ်အစိုးရသို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Open Letter to SPDC Bur 060409
Publish at Scribd or explore others: Books How-to-Guides & Manu Uncategorizable-Unca love letters
Posted by yahutha at 2:49 AM0comments
The 64th anniversary of Armed Forces Day was observed on 27 March 2009 in Naypyidaw, Myanmar. (Captured from MRTV3, 2009.3.28)
Posted by yahutha at 1:47 AM0comments
Jacba April 09
Posted by yahutha at 1:30 AM0comments
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလသတင်းစဉ်
ပြည်တွင်း လှို့ ဝှက် radio အစီအစဉ် (ပြည်သူနားတွေ ပိတ်လို့ ရရိုးလား)
၁၉၈၈ ရဲ့ နာကျည်းချက်များ..
MARCH FM RADIO .mp3 -
Posted by yahutha at 1:44 AM0comments
Posted by yahutha at 3:35 AM0comments
ဘန်ကောက်မှာ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရသွားတဲ့ လေးဖြူနဲ့ IC
IC from BK tw23
IC from BK tw23 tw23tinwin
မောက်မာ မာန်မဲ မျောက်မိုက် မင်းမူ
မျောက်များ မြန်မြန် မြင့်
မျောက်မျိုး မြန်မြန် မြတ်
မီးမွှေး မျောက် မီးမွှေး
မီးမှုတ် မျောက် မီးမှုတ်
မီးမြှိုက် မျောက် မီးမြှိုက်
Posted by yahutha at 1:59 AM0comments
time 100 tw23
time 100 tw23 tw23tinwin